I-Brook yemihla ngemihla: Fumana ezona Tweets zoMdla ziBalaseleyo | Martech Zone
Ngelixa ndilandela iiakhawunti ezininzi kwi-Twitter, andenzi njalo landela iiakhawunti. I-Twitter ngumjelo ekufuneka ndiwujongile imini yonke ukuba ndifuna ukuthatha lonke ulwazi endilifunayo kuwo. Ngelixa ndiyithandayo iTwitter kwaye sisixhobo esingakholelekiyo, ukufumana izixhobo ezikuvumela ukuba uwugqibe umxholo kuluncedo ngokwenene.
I-Brook ikuvumela ukuba wenze iindidi kwaye ulandele iiakhawunti ze-Twitter ngaphakathi kwezo ndidi. Njengoko ubona ngezantsi, ndiye ndakhangela Uhlalutyo, ndibhalisele abantu endinqwenela ukubalandela, emva koko ndababela icandelo labo Uhlalutyo.
Njengomntu ongagcini iliso lakhe ku-Twitter imini yonke, oku kuya kuba longezo elingenakuthelekiswa nanto kwizixhobo endizisebenzisayo ukukhawulezisa umsinga wam we-Twitter kunye nokufumana ulwazi oluphakama luye phezulu!
tags: umlamboumlambo mihla lei-curationTwitter